Pestiños de Andalucía - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
50 minitraOlona 25 ud150 kaloria
Efa nilaza taminao ve aho fa ny reniko dia avy any Granada, fony izy nilaza momba ny matsiro Club de Loja ohatra. Androany izao aho dia mitondra anao fomba fahandro hafa izay tena tiany satria mampiavaka azy ny taniny ary koa Seminera Paska: pestiños.
Toy ny amin'ny fomba fahandro nentim-paharazana maro misy kinova sy karazany maro karazana an-jatony. Koa mamporisika anao aho hamela anay hevitra momba an'ity lahatsoratra ity milaza aminay bebe kokoa momba ny pestiños fantatrao na tianao manokana.
Ireo izay fantatro dia miovaova ny ampahany amin'ny menaka ao anaty koba, na ny fomba fampidirana ny menaka izay endasina, fa indrindra amin'ny fonosana farany. Indraindray rakotra siramamy, kanelina sy aniseed izy ireo na, toy io tranga io, miaraka amin'ny a tantely tantely.
Pestiños Andalosiana mahazatra, mety tsara hiomanana amin'ny Paska na Krismasy. Amin'ity tranga ity dia rakotra siropam-tantely izy ireo, saingy azo rakotra siramamy sy kanelina koa izy ireo.
Fanompoana: 25 pcs
Fotoana manontolo: 50M
Voasarimakirana / zipo voasary 1 sotro fihinanana
75 g menaka oliva malefaka
Matalauva 1 sotro
Divay sherry 75 g
Ho an'ny tampon-tantely:
Rano 50 g
Ny hoditry ny voasary (hanandrana ny menaka fanendasana)
Izahay dia mametraka ny menaka, ny jirofo, ny matalauva ary ny zest ny voankazo nofidinay tao anaty vera sy programa 5 minitra, maripana 90º, hafainganana sotro. Amin'ity fomba ity ireo zava-manitra sy ny voankazo no hanitra ny menaka ataontsika. Miandry ny mari-pana hidina hatramin'ny 40º isika.
Manaraka izany, esorinay ny jirofo ary ampio ny divay, lafarinina ary masirasira. Izahay dia manao fandaharana 5 segondra, hafainganam-pandeha 6.. Avy eo dia mametaka programa 5 minitra, hafainganam-pandeha.
Manana menaka betsaka ny koba ka tokony ho elastika fa tsy miraikitra loatra. Raha miraikitra be izy ka tsy zakantsika tsara amin'ny tanantsika dia ampio lafarinina kely ary avereno fandaharana 1 minitra, haingam-pandeha.
Mamorona baolina izahay, manarona azy amin'ny sarimihetsika mangarahara (na mametraka azy ao anaty kitapo) ary miala mijoroa 30 minitra.
Izahay dia mamelatra ny koba eo ambony latabatra fiasana miaraka amina tsipika mihodina, manapaka efamira manodidina ny 6cm * 6cm ary aforeto anaty ny zorony roa ary apetehinay amin'ny rantsan-tanantsika sy rano iray mitete mba hamehezany tsara.
Manafana menaka tanamasoandro be dia be miaraka amin'ny voasarimakirana na voasarimakirana izahay ary rehefa mafana dia esorinay ny hoditra ary endasina ny pestiños. Manoro hevitra anao aho hanendasana azy ireo tsindraindray mba hahafahany mamily azy ireo tsara ary mba tsy hangatsiaka loatra ny maripana.
Esorinay izy ireo ary avelantsika amin'ny taratasy mpandray.
Ao anaty vera izahay dia manampy ny tantely sy ny rano ary manao programa izahay 3 minitra, 60º, hafainganana sotro. Apetrakay ao anaty kaontenera lalina sy malalaka io fanomanana io ary alentika tsirairay ao anaty pestisio izahay ary avelantsika hivoaka eo amin'ny fitoeran-drano izy ireo.
Notehirizintsika tao anaty fitoeran-drano avo lenta izy ireo mba hipetrahan'izy ireo.
Fanazavana fanampiny - Club de Loja
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Sakafo rezionaly, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Recipe de paska, Fivarotana mofomamy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Recipe manokana » Recipe de paska » Andalusian pestiños
Salama, inona i Matalauva?
Valiny tamin'i María Jose
Tonga nofo dia hoy izy:
Tsy azoko omena an'iza na iza ity fomba fahandro ity; ny koba tsy niaraka, nijanona lumpy tao amin'ny thermomix. Sambany nisy ahy io; Nampiako menaka misimisy kokoa ary na dia toa nisy endrika sy tsy fitovizan'ny koba aza izy io, dia mbola tapaka ihany rehefa manandrana mamorona pestiños 🙁
Mamaly an'i Encarna
Mitovy amin'ny anise, na dia matetika izany no anarana nomena ny zavamaniry izay mamokatra ny voa anise, anarana ara-teknika "Pimpinella anisum L"
Rehefa endasina izy ireo dia milatsaka, mieritreritra aho fa tsy mila masirasira be loatra, na mametafeta lava, ao anatin'ny telo minitra dia efa vonona ny koba.
Vary mamy misy taolan-tehezana voahosotra